iTunes 12.5 mamela anao hanondro zavatra tsy tiako | Avy amin'ny mac aho
iTunes 12.5 mamela antsika hanondro ny "Tsy tiako izany"
Tsy vitan'ny hoe mahita vaovao isika amin'ireo kinova fandidiana feno, izay omen'i Apple antsika amin'ny alàlan'ny Betas antsika, fa koa mahita lafiny maromaro na kely kokoa amin'ireo programa izay miaraka amin'ireo rafi-piasantsika. Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka isika iTunes 12.5. kinova izay hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny tananay ihany MacOS Sierra.
Ny zava-baovao resahina dia ny programa hamela antsika hanondro raha hira tiantsika, fa azontsika atao koa ny manondro izany tsy tianay izany.
Apple dia nampiasa ny mariky ny fo, rehefa manondro izahay fa ity hira ity dia anisan'ny ankafizinay, satria amin'ity indray mitoraka ity dia ho a fo torotoro diagonaly. Azontsika ampiharina ity hetsika ity tsy ho an'ny hira tsirairay ihany, raha tsy izany ho an'ny rakikira feno ihany koa.
Raha hampiasa io safidy io dia tsy maintsy asio marika ny bokotra (hira na rakikira) amin'ny bokotra ankavanana. Ao amin'ity menio lohan-kevitra ity ny safidy Tsy tia (Tsy tia)
Mbola ho hita eo izay fifandraisan'ny Apple amin'ity safidy ity, izay hitantsika fa ampiharina amin'ny serivisy Music Streaming hafa, toa ny Spotify o Play Music (Google). Raha ny fitsipika dia tokony hatsipy ireo hira ireo rehefa te-hanao a Smart Playlist, miaraka amin'ireo masontsivana tadiavinay hananana azy (karazana, vondrona, mpanakanto, sns.) ary miaraka amin'izay dia aza averina alefa amin'ny lisitry ny playlist izay angatahinay amin'ny Apple Music.
Antenaina fa tsy ho an'ny MacOS Sierra ihany io safidy io, fa farafaharatsiny ho an'ireo mpampiasa an'i Mac OS X Captain afaka mankafy azy io. Na ahoana na ahoana, ny zava-drehetra dia manondro fa hofaranana izany rehefa mahita mazava ilay jiro. MacOS Sierra. Manantena izahay fa hahalala ny daty farany amin'ny manaraka Keynote tamin'ny septambra, na dia eo aza ny tahan'ny famoahana ny Betas, dia toa manondro fa daty no hisy faran'ny volana septambra.
Ity safidy vaovao ity dia porofo iray hafa an'ny Ny fandraisana anjaran'i Apple amin'ny fanavaozana ny Media Center, miaraka amin'ny fikasana ny hitovy halavan'ny sisa amin'ireo lampihazo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iTunes » iTunes 12.5 mamela antsika hanondro ny "Tsy tiako izany"
Apple dia manandrana miorina ao Seattle ary manitatra bebe kokoa
Tim Cook dia 5 taona naha CEO